Sawir gacmeed aan xadi lahayn
Naqshad Naxaas Naxaas
Naqshadaha Abstract Caanka ah
Naqshadeynta Gargaarka Darbiga
Sawir gacmeedka Fiberglass
Taallo waaweyn oo Bannaanka ah
Tilmaamaha Qurxinta Jannooyinka
Jawaab celinta Macmiilka
Mabda'a dahaadhka nano iyo Electroplating wuu ka duwan yahay.
Farshaxanka Birta Farshaxanka Birta ah wuxuu aad ugu fiican yahay dahaadhka iyo xirfadda Electroplating. 1, mabda'a dahaadhka nano: dahaarka nano waa geedi socod falcelinta muraayada qalinka iyadoo la adeegsanayo qori lagu buufiyo si loogu buufiyo xalka lacagta ammonia dusha sare ee goobta shaqada. Ku buufi dhammaan waa lacag, ka dibna ...
Waa maxay warshad elektroonik ah
Waa maxay barkadda warshad elektiroonigga ah ee loo isticmaalo in lagu sameeyo koronto-xajinta lidka ku ah waa in la isticmaalo mabda'a barkadda korantada, meelaha birta ah ee dahaadhka ah ee lakabka khafiifka ah ee birta kale ama geedi socodka alloy, iyada oo loo marayo daaweynta korantada, waxay hagaajin kartaa birta lidka ku ah, xirashada iska caabbinta, ...
Sida Loo Xulo Hababka Maraakiibta
Dhab ahaan, siyaabaha maraakiibta ayaa noqda su'aalo diirada saaraya shixnad farshaxan casri ah. Iyada oo ay ugu wacan tahay qaabkeena farshaxanka ah ee gacanta lagu sameeyay ayaa ah mid adag markii aan isbarbar dhigno alaabada kale. Dhammaan farshaxanku waa farsamo gacmeed buuxa oo qaabeyn kara qaab kasta oo aad rabto ...
Waa maxay Qurxinta Qurxinta Jannadu
Miyaad jeceshahay farshaxankan birta ah ee birta ah ee aan la taaban karin oo u muuqda gacanta lagu hayo kubbadda. Farshaxankan farshaxanka ah ee birta biraha ah ayaa lagu rakibay bannaanka sidii farshaxanka casriga ah ee casriga ah. Dhammaan farshaxanku wuxuu kuxiran yahay farshaxankeena xirfadlaha ah halkan, markaa waan hubin karnaa ...
Waa Maxay Corten Steel Plant
Dhab ahaan walxaha birta ah ee loo yaqaan 'corten steel steel' waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa suuqyada dibedda sida dhismaha, buundada, kaabayaasha dhaqaalaha. Oo weliba waxaan u isticmaalnaa sheygan ceyriinka ah inaan uxirno dhirta ubaxa banaanka sidii barxad casri ah, beero, meelaha caamka ah oo lagu qurxiyo Faa'iidooyinka qaar ayaa halkan ku yaal si loo sameeyo sanduuqa birta ...
Waa maxay Wiishka Beerta Bannaanka
Ma kuusoo jiidatay Wiishkan Beerta Bannaanka ah? Sidaad ogtahayba taallooyinkan xayawaanku waxay ka samaysan yihiin alaab naxaas ah, kooxahan farshaxan gacmeedyada waxaa lagu rakibay guga kulul sida farshaxanka casriga ah. Xaqiiqdii taalooyinka biraha waa farshaxan bir ah sida qurxinta farshaxanka wanaagsan ...
Muxuu Yahay Shaqada Corten Steel Plant
Muxuu Yahay Shaqada Corten Steel Planter Dhamaan asxaabteyda waxaanan soo bandhigayaa mashruuceena cusub oo si gaar ah loogu talagalay shaqooyinka adag ee shaqaalaha kooxdeena xirfadleyda ah. Oo kuwani waa kuwa wax beero birta birta ah oo ka samaysan alaab bir ah oo corten leh oo aan biyuhu ...
Waa Maxay Sawirka Askarigu
Muxuu Yahay Naqshad Sameynta Askartaan Sawir gacmeedka ah ee lagu caawinayo derbiga waxaa xardhay shaqadeena kooxda xirfadleyda ah. Miyaad soo jiidan doontaa taladan weyn ee taakuleynta bannaanka? Tirooyinka waxaa lagu xardhay si heer sare ah oo jilicsan oo muuqaalka wajiga ayaa aad u muuqda. Sawirkaan ...
Muxuu Yahay Asalka Kirismaska
Maalinta Kirismaska ​​waa maalin fasax muhiim ah lagu xuso dhalashadii Ciise oo sidoo kale loo yaqaan Ciise Masiix. Taariikhda dhalashadii Ciise kuma qorna Kitaabka Quduuska ah. Sannadkii 336 AD, Kaniisaddii Roomaanku waxay bilowday inay qabato xafladdan Diisambar 25. Diisambar 25-keedii waxay ahayd birt ...
Waa Maxay Birta Hadiyadaha Birta
Miyaad soo jiidanaysaa farshaxankan biraha waaweyn ee casaanka ah? Dusha sare ee birta birta waxaa lagu xardhay midab casaan leh dhalaalaya oo dusha sare leh. Sawirka weyn ee hadiyadaha ah wuxuu noqon karaa qurxin banaanka maalinta Kirismaska. Waxaan u maleynayaa in farshaxankan birta ah ee birta ah uu noqon doono ...
Mashiinka Corten Ma Lagu Dhejin Karaa?
Sawirada birta ah ee loo yaqaan 'corten steel' waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa meelaha qaar sida qurxinta darbiga muuqaal ahaan. Maaddadani waa mid waaraysa oo jilicsan, taas oo lagu dhejin karo qaabab qaabaysan. Waan ognahay saxanka miridhku birta u adkaysta in la beddeli doono kolba kolkuu socdo, midabkiisuna la ...
Maxay Tahay Sabuuradda Birta ah ee Corten
Birta saafiga ahi ma sahlana in miridhku dhaco laakiin birta caadiga ah waxay badanaa ku jirtaa naxaas, kaarboon iyo waxyaalo kale oo nijaas ah. Waxqabadka wasakhdaani way ka hooseysaa birta, baytariyada ceeriin waxaa lagu sameeyaa bir birta ah ee hawo biyo leh (sida iyada oo loo marayo falcelinta redox ee dhalinta korantada), Waxay siisaa shay ...